Beyonce ပင်တိုင်မိတ်ကပ်ပညာရှင်ပြောပြတဲ့ Foundation လိမ်းနည်းလျို့ဝှက်ချက်
11 Mar 2018 . 11:57 AM
Beyonce ပင်တိုင် မိတ်ကပ်ပညာရှင်ပြောပြတဲ့ Foundation လိမ်းနည်းလျို့ဝှက်ချက်
Sir John ဆိုတာက တစ်ကယ့်နာမည်ကြီး Top Star တွေဖြစ်တဲ့ Joan Smalls၊ Carlie Kloss နဲ့ Kim Kardashian၊ Beyonce တို့ရဲ့ လုံးဝယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ အရည်အချင်းရှိ ကျွမ်းကျင်မိတ်ကပ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ Makeup Industry ထဲမှာ မိတ်ကပ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် ထုံးလိုမွှေ ရေလိုနှောက်နိုင်တဲ့ ဘက်စုံထူးချွန်တဲ့ အတွေ့အကြုံရှိသူတစ်ယောက်အဖြစ် နာမည်သတင်းမွှေးသူပါ။
ဒီလို Makeup ဂုရုကြီးကနေပြီး မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါ ပြီးပြည့်စုံဆုံး Foundation ကိုရဖို့ ဘယ်လိုမိတ်ကပ်သား ကစားရမယ်ဆိုတာ Popsugar Magazine ကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
လူတိုင်းမှာကတော့ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ အနေအထားက အသားအရောင်နဲ့ ကိုယ့်မျက်နှာပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပါတယ်။ တချို့က မိတ်ကပ်သားထူထူ၊ တချို့က ပါးပါး၊ တချို့ကျ မိတ်ကပ်သားမရှိသလောက်သဘာဝအတိုင်းလေးကို သဘောကျတတ်ပါတယ်။ Sir John ကတော့ ဒီ 2018 မှာ သူတီထွင်ခေါ်ဆိုထားတဲ့ “The Second Skin” လို့ခေါ်တဲ့ Makeup Look လေးက ခေတ်စားလာဦးမှာပါတဲ့။ ကိုယ်အိပ်ယာနိုးနိုးချင်း အိပ်ယာပေါ်ကထပြီးမှန်ကြည့်လိုက်တိုင်း ချစ်ဖို့ကောင်းနေမယ့် သဘာဝအသွင်ပြင်ပုံစံမျိုးလေးဆိုပဲ။
ဒါဆို ဘယ်လိုနည်းလမ်းမျိုးလေး ဖြစ်မှာပါလိမ့်? လွယ်လွယ်လေးပါ။ ကိုယ့်မျက်နှာမှာ လိမ်းထားတဲ့ Moisturizer တွေမခြောက်ခင် စိုစွတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ Foundation ကို ညီညီလိမ်းပေးပါတဲ့။ အဆီပြန်တဲ့ မျက်နှာအသားအရေအတွက်တော့ နည်းနည်းအဆင်မပြေဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဒီလို ဆန့်ကျင်ဘက်လိမ်းခြယ်နည်းကလည်း Foundation နဲ့ အသားရေ ဘယ်လောက် ကပ်တင်အားရှိလဲ သိနိုင်ရာရောက်ပါတယ်။
Foundation လိမ်းတဲ့အခါမှာလည်း စိုစိုစွတ်စွတ်လေးနဲ့ ညီညာတဲ့ အနေထားရဖို့ Beauty Blender အစိုလေးနဲ့ပဲ လိမ်းသင့်ပါတယ်တဲ့။ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် မျက်နှာတခုလုံး လိမ်းခြယ်မဲ့အစား Coverage လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတွေလောက်ပဲလိမ်းတာမျိုးက အိပ်ယာကထကာစလို သဘာဝအတိုင်းလေး ဖြစ်နေစေမှာပါ။
သဘာဝအတိုင်းလေးလှနေစေဖို့ သူအကြံပေးတဲ့ Foundation တွေက ကိုယ်တွေနိုင်ငံမှာလည်း အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ L’oreal Infallible Pro Glow Foundation၊ Nars All Day Luminious Foundation တို့ကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်တဲ့။
ဒီအချက်လေးတွေ လိုက်နာရုံနဲ့ Queen B လိုမျိုးနေ့ချင်းညချင်းကြီး မလှပသွားနိုင်ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ နည်းစနစ်တွေ သိရတော့ ကိုယ့်အလှအပအတွက်လည်း အထောက်အကူပြုရာရောက်တာမို့ သဘာဝအတိုင်းလေးလှနေဖို့ မနက်ဖြန်ကစပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြင်ဆင်ခြယ်သကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
Beyonce ပငျတိုငျ မိတျကပျပညာရှငျပွောပွတဲ့ Foundation လိမျးနညျးလြို့ဝှကျခကျြ
Sir John ဆိုတာက တဈကယျ့နာမညျကွီး Top Star တှဖွေဈတဲ့ Joan Smalls၊ Carlie Kloss နဲ့ Kim Kardashian၊ Beyonce တို့ရဲ့ လုံးဝယုံကွညျစိတျခရြတဲ့ အရညျအခငျြးရှိ ကြှမျးကငျြမိတျကပျပညာရှငျတဈယောကျပါ။ Makeup Industry ထဲမှာ မိတျကပျနဲ့ ပတျသကျရငျ ထုံးလိုမှေ ရလေိုနှောကျနိုငျတဲ့ ဘကျစုံထူးခြှနျတဲ့ အတှအေ့ကွုံရှိသူတဈယောကျအဖွဈ နာမညျသတငျးမှေးသူပါ။
ဒီလို Makeup ဂုရုကွီးကနပွေီး မိနျးကလေးတိုငျးအတှကျ မိတျကပျလိမျးတဲ့အခါ ပွီးပွညျ့စုံဆုံး Foundation ကိုရဖို့ ဘယျလိုမိတျကပျသား ကစားရမယျဆိုတာ Popsugar Magazine ကို ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
လူတိုငျးမှာကတော့ မိတျကပျလိမျးတဲ့ အနအေထားက အသားအရောငျနဲ့ ကိုယျ့မကျြနှာပျေါမူတညျပွီး အမြိုးမြိုးပွောငျးလဲပါတယျ။ တခြို့က မိတျကပျသားထူထူ၊ တခြို့က ပါးပါး၊ တခြို့ကြ မိတျကပျသားမရှိသလောကျသဘာဝအတိုငျးလေးကို သဘောကတြတျပါတယျ။ Sir John ကတော့ ဒီ 2018 မှာ သူတီထှငျချေါဆိုထားတဲ့ “The Second Skin” လို့ချေါတဲ့ Makeup Look လေးက ခတျေစားလာဦးမှာပါတဲ့။ ကိုယျအိပျယာနိုးနိုးခငျြး အိပျယာပျေါကထပွီးမှနျကွညျ့လိုကျတိုငျး ခဈြဖို့ကောငျးနမေယျ့ သဘာဝအသှငျပွငျပုံစံမြိုးလေးဆိုပဲ။
ဒါဆို ဘယျလိုနညျးလမျးမြိုးလေး ဖွဈမှာပါလိမျ့? လှယျလှယျလေးပါ။ ကိုယျ့မကျြနှာမှာ လိမျးထားတဲ့ Moisturizer တှမေခွောကျခငျ စိုစှတျနတေဲ့အခြိနျမှာပဲ Foundation ကို ညီညီလိမျးပေးပါတဲ့။ အဆီပွနျတဲ့ မကျြနှာအသားအရအေတှကျတော့ နညျးနညျးအဆငျမပွဖွေဈနိုငျပမေယျ့ ဒီလို ဆနျ့ကငျြဘကျလိမျးခွယျနညျးကလညျး Foundation နဲ့ အသားရေ ဘယျလောကျ ကပျတငျအားရှိလဲ သိနိုငျရာရောကျပါတယျ။
Foundation လိမျးတဲ့အခါမှာလညျး စိုစိုစှတျစှတျလေးနဲ့ ညီညာတဲ့ အနထေားရဖို့ Beauty Blender အစိုလေးနဲ့ပဲ လိမျးသငျ့ပါတယျတဲ့။ အဆငျပွမေယျဆိုရငျ မကျြနှာတခုလုံး လိမျးခွယျမဲ့အစား Coverage လိုအပျတဲ့အစိတျအပိုငျးလေးတှလေောကျပဲလိမျးတာမြိုးက အိပျယာကထကာစလို သဘာဝအတိုငျးလေး ဖွဈနစေမှောပါ။
သဘာဝအတိုငျးလေးလှနစေဖေို့ သူအကွံပေးတဲ့ Foundation တှကေ ကိုယျတှနေိုငျငံမှာလညျး အလှယျတကူရနိုငျတဲ့ L’oreal Infallible Pro Glow Foundation၊ Nars All Day Luminious Foundation တို့ကို ရှေးခယျြသငျ့ပါတယျတဲ့။
ဒီအခကျြလေးတှေ လိုကျနာရုံနဲ့ Queen B လိုမြိုးနခေ့ငျြးညခငျြးကွီး မလှပသှားနိုငျပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ နညျးစနဈတှေ သိရတော့ ကိုယျ့အလှအပအတှကျလညျး အထောကျအကူပွုရာရောကျတာမို့ သဘာဝအတိုငျးလေးလှနဖေို့ မနကျဖွနျကစပွီး ကိုယျ့ဟာကိုယျပွငျဆငျခွယျသကွညျ့လိုကျကွရအောငျ။